Singapore Event for Shwe Myanmar, Shwe Myanmar Rooms
Ph : +27734818506
HOW TO JOIN ILLUMINATI SECRET SOCIETY FOR MONEY+27734818506 IN Lesotho, Namibia,Botswana, Zambia,Swaziland,Madagascar,Zimbabwe,GHANA,SOUTH AFRICA,Uganda,Limpo­po,JORDAN, Kuwait, Turkey, Belgium, Saudi Arabia, Australia, Malaysia,a Johannesburg, Lebanon,Berhrain USA, Kenya , California, Dallas, England, German, Spain, Jamaica, Brasil, Germany, Austria, Vancouver, Denmark, Hong Kong, China ,, Pretoria, Durban, Australia, Wales, France, Cairo, China, Norway, Sweden, Cameroon, Capetown, Tanzania, Northern Cape, New
ENDLESS ROCK EVENT
Ph : ၉၀၆၉၉၄၅၉ နဲ့ ၈၂၃၂၈၁၅၂
မြနန္ဒာ Plus, Peninsula Plaza
SMEG ရဲ့ ပွဲဦးထွက် အစီအစဉ် အ ဖြစ် အဆိုတော် ထူအယ်လင်း ရဲ့ Rock သီချင်း မြူးမြူးလေးတွေ နဲ့ မြန်မာပြည်ဖွား တိုင်းရင်းသားညီအကိုတွေ ပါဝင်တီးခတ် ကြမဲ့ kick-off Band ကို မိတ်ဆက်ရင်း…. လူငယ် အဆိုတော် SayZ နဲ့ အတူ ဧည့်သည် အဆိုတော်များဖြစ်ကြတဲ့ Ahdulay(Manger) ၊ Wyne ၊ သဉ္ဇာသန့်ဇင် နဲ့ Thwe Thwe တို့ ရဲ့ ENDLESS ROCK EVENT………… *နေရာ ကတော့ မြနန္ဒာ Plus, Peninsula Plaza ဖြစ်ပြီး *အချိန် က ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက်နေ့၊ စနေနေ့ည ၈:၃၀ မှာ
ENDLESS ROCK EVENT…………
အောက်စဖို့ဒ်ဆရာတော် ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ ဓမ္မသာမိ
Lian Shan Shuang Lin Monastery 184 Jalan Toa Payoh, 319944
စင်္ကာပူနိုင်ငံ တရားပွဲ ဖိတ်ကြားအပ်သည် ~~~~~~~~~~~~~~~~ အဂ္ဂမဟာဂန္တဝါစကပဏ္ဍိတ၊ အဂ္ဂမဟာသဒ္ဓမ္မဇောတိကဓဇ၊ ကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓသာသနာပြု အောက်စဖို့ဒ်ဆရာတော် ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ ဓမ္မသာမိ DPhill(Oxford), MPhil(Kelaniya) Chief Abbot of Oxford Buddha Vihara (UK) Chief Abbot of Oxford Buddha Vihara(Singapore) Chief Abbot of Oxford Buddha Vihara(Yangon) ရှမ်းပြည်နယ် ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် ဦးစီးတည်ထောင်သူ ရန်ကုန်မြို့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓသာသနာပြု တက္ကသိုလ် ပါမောက္ခ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်များ အသင်းကြီး ကို တည်ထောင်သူ founder of International Association of Buddhist Universities (IABU) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ထေရဝါဒ
ကမ္ဘာ့သာသနာပြု မဟာဇေယျသိဒ္ဓိ အဓိဋ္ဌာန်ဆရာတော်ကြီး ဘဒ္ဒန္တကုလရက္ခိတ၏ သက်တော် (၇၀)ပြည့် ဝိဇာတမင်္ဂလာ နှင့် ကထိန်အကြိုသင်္ကန်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းပွဲ အခမ်းအနား ဖိတ်ကြားလွှာ (စင်္ကာပူ)
Ph : 9387 8290, 9437 9016, 9457 2267
The Arena Country Club 511 Upper Jurong Road, Singapore 638366
ကမ္ဘာ့သာသနာပြု မဟာဇေယျသိဒ္ဓိ အဓိဋ္ဌာန်ဆရာတော်ကြီး ဘဒ္ဒန္တကုလရက္ခိတ၏ သက်တော် (၇၀)ပြည့် ဝိဇာတမင်္ဂလာ ဖိတ်ကြားလွှာ (စင်္ကာပူ)
ကမ္ဘာ့သာသနာပြုမဟာဇေယျသိဒ္ဓိအဓိဋ္ဌာန်ဆရာတော်ကြီး၏ (၆၉)နှစ်ပြည့် ဝိဇာတမင်္ဂလာ အခမ်းအနား ဖိတ်ကြားလွှာ (စင်္ကာပူနိုင်ငံ)
Ph : 93878290
The Arena Country Club, 511 Upper Jurong Rd, Singapore 638366 (7 mins walking distance from Joo Koon MRT Station (Green Line)
ကမ္ဘာ့သာသနာပြုမဟာဇေယျသိဒ္ဓိအဓိဋ္ဌာန်ဆရာတော်ကြီး၏ (၆၉)နှစ်ပြည့် ဝိဇာတမင်္ဂလာ အခမ်းအနား ဖိတ်ကြားလွှာ (စင်္ကာပူနိုင်ငံ) ပဉ္စမအကြိမ်မြောက် ကမ္ဘာ့သာသနာပြု မဟာဇေယျသိဒ္ဓိ အဓိဋ္ဌာန်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္ဘ္တ ကုလရက္ခိ၏ (၆၉)နှစ်မြောက် ဝိဇာတမင်္ဂလာအခမ်းအနားကို စင်္ကာပူနိုင်ငံတွင် အအောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပါသဖြင့် တက်ရောက်ကြည်ညိုနိုင်ကြပါရန် လေးစားစွာ ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။ ဆရာတော်ကြီး မွေးနေ့ အခမ်းအနားအတွက် လိုအပ်သော သက်သတ်လွတ် ဆွမ်း၊ သင်္ကန်း၊ အစာအဟာရနှင့် အချိုရည်များ အပါအဝင် မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ် မွေးနေ့ပဒေသာပင် တစ်ပင်လျှင် စင်္ကာပူဒေါ်လာ (၇၀)နှုန်းဖြင့် တစ်ဦးချင်းဖြစ်စေ၊ စုပေါင်း၍ဖြစ်စေ အောက်ဖော်ပြပါ ပုဂ္ဂိုလ်များကို ဆက်သွယ်လှူဒါန်းနိုင်ကြပါရန် နိဗ္ဗာန်အကျိုးမျှော်၍ တိုက်တွန်းနှိုးဆော်အပ်ပါသည်။ ဆက်သွယ်ရန် – ဦးကျော်စိုးလှိုင် (9437 9016) မပွင့်ဖြိုးဇော် (9387 8290) Mr. Julian Wee
Ph : 6562977755
Saravana Bhavan provides the best south indian food in singapore withareal taste from South India. It provides high quality vegetarian food without compromising on taste. It provides the chain of high quality vegetarian restaurants. It works worldwide for south indian vegetarian food eaters. This is the best south indian restaurants in Singapore. OUR
ကမ္ဘာ့သာသနာပြု မဟာဇေယျသဒ္ဓိ အဓိဋ္ဌာန်ဆရာတောဘဒ္ဒန္တ ကုလရက္ခိတ၏ (၆၈) ပြည့် ၀ိဇာတမင်္ဂလာ ဖိတ်ကြားလွှာ
Ph : 9457 2267, 9338 6481, 9387 8290
Yeo's Building,2Telok Blangah Street 31, Singapore 108942
ကမ္ဘာ့သာသနာပြု မဟာဇေယျသဒ္ဓိ အဓိဋ္ဌာန်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ ကုလရက္ခိတ၏ သက်တော် (၆၈) နှစ်ပြည့် ၀ိဇာတမင်္ဂလာ အခမ်းအနားကို စင်္ကာပူနိုင်ငံတွင် စတုတ္ထအကြိမ်အဖြစ် စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပြီး ဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင်ကြွရောက်မည် ဖြစ်ပါသဖြင့် တက်ရောက်ကြည်ညိုပူဇော် နိုင်ပါရန် လေးစားစွာ ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။ ဆရာတော်ကြီး၏ မွေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ငွေပဒေသာပင် တစ်ပင်လျှင် စင်္ကာပူဒေါ်လာ (၆၉)နှုန်းဖြင့် တစ်ဦးချင်းဖြစ်စေ၊ စုပေါင်း၍ဖြစ်စေ ထည့်ဝင်လှူဒါန်းနိုင်ပါသည်။ တခြားသော သက်သတ်လွတ် ဆွမ်း၊ အာဟာရဒါနနှင့် လှူဒါန်းမှုအစုစုတို့ဖြင့် ပါရမီဖြည့်ဆည်းလိုသော ဒကာ၊ဒကာမများ အနေဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါ ဆက်သွယ်ရန် ပုဂ္ဂိုလ်များမှတဆင့် ဆက်သွယ်လှူဒါန်းနိုင်ပါကြောင်း အသိပေး နှိုးဆော်အပ်ပါသည်။ အခမ်းအနား အစီအစဉ် နေ့ရက် ။ ။ အောက်တိုဘာလ (၁၁) ရက် (တနင်္ဂနွေနေ့) နေရာ